I-16 kwi-1IPTV Encoder ingasetyenziswa kwimfundo ekude ye-HD, ukuSasazwa kwe-Broadcast Broadcast, i-Remote Multi-windows Video Conference, Hospitality IPTV Isicelo kunye nokusasazwa kwe-IPTV- CZH / Fmuser Fm Transmitter China Supporter Ukuqhakamshelana: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyueokera99991
ikhaya » iindaba » I-16 kwi-1IPTV Encoder ingasetyenziswa kwimfundo ekude ye-HD, ukuSasazwa koSasazo lweLizwe, Inkomfa yeVidiyo yeWindows emininzi, ukubukelwa i-IPTV kwesicelo kunye nokusasazwa kwe-IPTV ngakumbi
I-16 kwi-1IPTV Encoder ingasetyenziswa kwimfundo ekude ye-HD, ukuSasazwa koSasazo lweLizwe, Inkomfa yeVidiyo yeWindows emininzi, ukubukelwa i-IPTV kwesicelo kunye nokusasazwa kwe-IPTV ngakumbi
Umhla: 2017-08-14 / udidi: iindaba
I-16in 1 IPTV HDMI Encoder / Ividiyo yokusasazwa kweVidiyo
Imarike yanamhlanje yeTV ekhuphisanayo ifuna ababoneleli beenkonzo zeTV kunye nabaqhubi abanikezela ukufikelela kumxholo kwiscreen ngasinye, ngelixa baphucula ukusebenza kakuhle kunye nokunciphisa ubunzima kumaqonga ahlukeneyo. I-16in1 I-FMUSER FBE216 encoder ijonge ukujongana nemfuno yokuhanjiswa kwevidiyo. Ingasetyenziswa kwiinkqubo ezahlukeneyo zokusasaza zedijithali ezifana nemfundo ekude ye-HD, usasazo lwasasaza bukhoma, ingqungquthela yevidiyo eneefestile ezininzi ezahlukeneyo, ukusetyenziswa kwe-IPTV ngobubele kunye nokunye.
• I-720, 720P, 1080P yokusombulula ukusonjululwa
I-H.265 /H.264 / Iprofayile yesiseko / Iprofayili ephezulu / Inkxaso yokucinezelwa kwevidiyo
• Ixhasa useto lomgangatho wesakhelo se-GOP
• I-MP3 kunye ne-AAC-LC / HE yokunyanzeliswa komsindo
• Inzuzo yomsindo inokutshintshwa
• Iscrown Caption (OSD) kunye ne logo inokufakwa
Iisetingi zepharamitha yomfanekiso
• Ulawulo olusekwe kwiwebhu
• Imowudi yokuphuma komsindo inokutshintshwa -Istereo, ngasekhohlo nasekunene
• Iinkqubo zixhasa ukuya kutsho kwisithathu se-TS ngaphezulu kokuphuma kwe-IP
• Ixhasa ipfmpeg kunye neProtocol yeVidiyo yeNeVIF
• Inikezela ngomgaqo we-UDP / RTMP / RTSP / HTTP
• I-protocol emininzi, amaqondo amaninzi kunye nezisombululo ezininzi zinokuqwalaselwa
• Ixhasa izixhobo ezininzi ziboniswa ngaxeshanye kwikhompyuter enye
• Imowudi ye-1000M / 100M epheleleyo
• Imithombo emininzi yokukhupha yonke inkonzo yokufakelwa ukuxhasa i-VOD, usasazo, i-OTT kunye ne-IPTV, iwebhu okanye ii-mobileset zebhokisi ephambili
• Ixhasa iMicrosoft WMENCODER kunye noyilo lweWDM
• Iyahambelana nendlela ye-WDM kunye noyilo lwesoftware yeVFW
I-encoder ye-16in1 iyakwazi ukuxhasa ividiyo eyi-16 kunye ne-16 ye-HDMI ingqokelela yeaudio ngokufaka ngaxeshanye. Isitayile se-3.5mm okanye i-HDMI inokusetyenziselwa umgca wokulalelwayo. Sonke isiteshi segalelo le-HDMI sinokuxhasa isiphumo se-3 yemithombo ye-IP ngezisombululo ezi-2 ezahlukeneyo zokuncitshiswa kwetrrate. Oku kuthetha ukuba unokufumana enye ngesisombululo esisezantsi kwaye esinye ngesisombululo esiphezulu. Iqela ngalinye le-flowgroup ye-IP ikwaxhasa iintlobo ezi-2 zokukhutshwa kweprothokholi ye-IP.
I-FBE216 inokunikezela ngemithombo yevidiyo ye-H.265 / H.264 / encoding ngeendlela ezahlukeneyo zokuphuma kwe-IP kwizisele ezahlukeneyo ze-OTT kunye nezicelo ze-IPTV ezinje ngeWindows Media Server, Adobe Flash Server, RED5, Wowza Media Server kunye nezinye iiseva ezisekwe Iiprotokholi ze-HTTP / RTSP / UDP / ONVIF / RTMP / RTMP. I-encoder ixhasa i-decode yeVLC kwaye isebenza kakuhle ngamaqonga okusasaza kunye nokusasazwa bukhoma kwiinkonzo zokusasaza ezinje nge-Ustream, i-Facebook bukhoma, i-Livestream, i-Red5, iTikilive, i-YouTube Live, i-WOWZA, iTwitch, i-FMS, i-Meridix, i-Netrmedia, i-Streamspot kunye ne-Dacast. Iinguqulelo ze-SDI ziyafumaneka ngokunjalo.
Ungayisebenzisa phi i-16in1 Encoder?
I-encoder ye-16in1 FMUSER FBE216 ingasetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo. Kuba ixhasa ukhuseleko ekufunweni kunye nokusebenza ngokujikelezayo ngaphakathi nangaphakathi kwinethiwekhi yomdibaniso, i-FBE216 ivumela amashishini ukuba enze ubandakanyeko, andise ukuthengisa, anciphise iindleko zokuhamba kwaye andise eyabo ngokuhambisa ividiyo. Inika isisombululo esinamandla sokusasaza kwaye ikhuthaza ukusasazwa okutsha ngokuhambisa amajelo osasazo ehlobo kunye nokwenza iindlela zosasazo zokuphelisa ukukhuthaza intatho-nxaxheba yabemi kunye nobuntatheli beemoto.
I-FBE216 ikwanceda izikolo ngokuhambisa izisombululo zokusasaza imfundo.Bakhuphele abafundi abafuna ukuqhubeka nemfundo yabo okanye abo bangakwaziyo ukuya kwigumbi lokufundela eliqhelekileyo ngenxa yezinye iimbophelelo banokufumana izisombululo ezizizo njengoko benokubukela intetho nangaliphi na ixesha naphina. I-16in1 FMUSER FBE216 encoder enokunceda onke amashishini kunye namashishini afuna ukwandisa ukufikelela kwawo kwaye anikeze umxholo ngendlela efanelekileyo ngakumbi kubaphulaphuli bawo.
Ungayalela phi i-16 kwi-1 ye-HDMI IPTV encoder?
«Ngaphambili: Uyisebenzisa kanjani i-encoder ye-IPTV ukwenza isisombululo esinethiwekhi sangaphakathi soSasazo lweNethiwekhi?
I-FMUSER RDS-Encoder ibonakalisiwe kwiNtlanganiso yeQonga yeRSS :Okulandelayo "